ब्लग-टिपिंग: आत्मनिर्भर पोष्ट | Martech Zone
सोमवार, जुलाई 9, 2007 बिहीबार, अक्टुबर 23, 2014 Douglas Karr
मेरो अर्को तिप्पी रायन हो जसले एक उद्यमी ब्ल्ग चलाउँछन्, भनिन्छ आत्मनिर्भर पोष्ट। सेल्फ-रिलियन्ट पोष्ट एक ब्लग हो कि कसरी अनलाइन गृह व्यवसाय र यससँग सम्बन्धित अन्य विचारहरूसँग पैसा कमाउने भनेर। (मैले त्यो अन्तिम वाक्यबाट बारेमा पृष्ठ।)
दोह! के मैले भर्खर स्पाम पाएँ? जब मैले ती सबै हाइफनहरूको साथ डोमेन नाम याद गरेँ, त्यो पहिलो विचार हो जसले मलाई हिर्कायो। क्लिक-थ्रु गर्नका लागि मैले नर्व निर्माण गरेपछि मैले एक उचित साइट फेला पारे। म पहिले चिन्तित थिएँ, यद्यपि!
तपाई नयाँ डोमेन नाम फेला पार्न गम्भीर भई सोच्न सक्नुहुन्छ। त्योले भन्यो - तपाईसँग हाल कुनै रैंकिंग हराउन आवश्यक छैन। साधारण रूपमा यस डोमेनलाई फेस गर्न र तपाईंको साइटको लागि नयाँ प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। अवश्य पनि यो मेरो सबै विचार हो!
तपाईंको शैली पानाको साथ त्यहाँ केहि मजा भइरहेको छ। फुटर पigned्क्तिबद्ध छोडियो र केन्द्र (सामग्री) डिभल पृष्ठको लम्बाइ फुटरमा चल्दैन। म एउटा अनुमान लगाउँदै छु, तर मलाई लाग्छ तपाईंसँग मुख्य पृष्ठमा एक ठग क्लोजिंग डिभ मार्क (> / div>) वरपर हुन सक्छ। अन्य पृष्ठहरू सही रूपमा रेन्डर गरिएको देखिन्छ।
यहाँ राम्रो छ ... के तपाईंलाई थाहा छ सर्च ईन्जिनहरूले वेब पृष्ठमा सबै सामग्री क्रल गर्दैन? तिनीहरू पृष्ठको शीर्षबाट कुञ्जीशब्दहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई अनुक्रमणिका उचित रूपमा तान्न। यदि तपाइँ सामग्री खोज्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको खोज इञ्जिन प्लेसमेन्ट, पृष्ठ को शीर्षमा सामग्री पुश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाइँको सजावट मा, तपाइँ वास्तवमा दुबै साइडबारलाई तपाइँको सामग्री अघि राख्नुहुन्छ! तपाइँको विषयवस्तुमा कुनै चोट नपुर्‍याईकन, तपाइँले सामग्री साइड साइडबारको माथि सार्न सक्षम हुनुपर्नेछ र त्यस सामग्रीलाई अधिक प्रभावकारिता अनुक्रमणिकामा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईले आफ्नो फिड ठेगाना तपाईको साइडबारमा पहिचान गर्न राम्रो काम गर्नुभयो तर मैले एउटा नक्कल भेट्टाए जुन तपाईलाई चोट पुर्याउन सक्छन! तपाईंको हेडरमा वैकल्पिक लिंकहरूको सेट छ जुन तपाईंको RSS फिडमा दर्साउँछ। ब्राउजरहरूले यो वैकल्पिक लि use्क "आरएसएस" बटन प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्दछ तपाईको सदस्यता लिन सजिलोको लागि। समस्या यो हो कि वैकल्पिक लिंक तपाईंको मूल फिड ठेगाना हो (तपाईंको बायाँ साइडबारमा आधा-मार्ग तल तल यसको लिंक पनि छ)। तपाईको साइटमा तपाईले सोचेको भन्दा बढि धेरै व्यक्तिहरू हुन सक्दछन किनकि उनीहरूसँग मापन गरिएको छैन फिडप्रेस.
हेडर ठीक गर्न, यी तीन लाइनहरू फेला पार्नुहोस्:
र यो संग बदल्नुहोस्:
म केवल बायाँ साइडबारमा फिड लि links्कहरू मेटाउनेछु किनभने मान्छेहरूले फिड प्रतीक वा ब्राउजर मार्फत फेला पार्नेछन्।
हेडिहरू ध्यान आकर्षित गर्नेहरू हुन् - केवल पाठकहरूको लागि मात्र होइन तर खोज इञ्जिनहरूका लागि पनि। तपाईंको पोष्टको हेडिings h3 हुन् जबकि तपाईको साइडबार सेक्सनको हेडिंग h2 हुन्। त्यहाँ एक राम्रो सम्भावना छ कि खोज इञ्जिनहरूले तपाइँलाई टर्मको लागि उच्च श्रेणीमा राख्दछन् हाल टिप्पणिहरु भन्दा प्रस Ads्ग विज्ञापनको साथ पैसा कमाउनुहोस्। यी मामिलाहरूलाई सच्याउन तपाईंले आफ्नो शैली पाना र तपाईंको विषयवस्तु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
तपाईं मलाई "मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्" भन्छन कि एक लिंक राखेर फिबिंग गर्दै हुनुहुन्छ। जब म त्यसमा क्लिक गर्दछु, मँ एक पृष्ठमा ल्याइएको छु जहाँ म तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्दिन! दोह! मलाई लाग्छ एक सम्पर्क फारम त्यो पृष्ठमा ठिक देखिनेछ!
कृपया यो कामको बारे अनुसरण गर्नुहोस् र मेरो अन्य पढ्न निश्चित हुनुहोस् पीजीए लिलामीहरूको लागि ब्लग-टिपिंगविशेष गरी रोबोट.टक्सट र साइटम्याप.एक्सएमएलको सम्बन्धमा। म विश्वास गर्दछु कि तपाईले आफ्नो वेब उपस्थिति र खोज इञ्जिनको उपस्थिति सुधार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पोस्टमा सुझावहरूको साथ।
यसले तपाइँलाई केही समयको लागि व्यस्त राख्नु पर्छ! मलाई तपाईको ब्लग जाँच गर्न दिनुभएकामा धन्यवाद! मलाई लाग्दैन कि धेरै व्यक्तिहरूले प्रभाव ईन्जिन अनुकूलनमा प्रभाव शैली र लेआउटको कतिको खेल्न सक्छन्। यो मेरो साइट को साथ एक बिट काम गरीएको छ त्यसैले म सुझाव दिनुहुन्छ कि कसैले मलाई सिकायो मा पारित गर्न!
टैग: atom 0.3ब्लगिङ सुझावहरूफिड ठेगानाहेडर फिड ठेगानाआरएसएसrss २rss २RSS लिंक